Netra Kuona Njere: Tarisa Chako Chitarisiko Pamhepo | Martech Zone
Netra Kuona Njere: Tarisa Chako Chitarisiko Pamhepo
Chitatu, July 12, 2017 Chipiri, July 11, 2017 Douglas Karr
Netra kutanga kwekugadzira Image Kuziva tekinoroji kunoenderana neAI / Yakadzika Kudzidza kutsvagisa kwakaitwa paMIT's Computer Science uye Artificial Intelligence Laboratory. Software yeNetra inounza chimiro kune yaimbove isina kugadzirwa mifananidzo pamwe nekujeka kunoshamisa. Mukati me400 milliseconds, Netra inogona kumaka mufananidzo wakavhenekwa wemarogo emavara, mamiriro emufananidzo, uye hunhu hwemeso emunhu.
Vatengi vanogovana mamirioni mabhiriyoni matatu emifananidzo pasocial media mazuva ese. Mukati memifananidzo yakagovaniswa munharaunda mune maonero akakosha nezve zviitiko zvevatengi, zvido, zvishuwo zvemhando, hukama, uye zviitiko zvakakosha zvehupenyu.
KuNetra, tinoshandisa AI, kuona kwemakomputa, uye kudzidza kwakadzama kubatsira vashambadzi kuti vanzwisise zvirinani izvo vatengi vari kutogovana; tekinoroji yedu inogona kuverenga mifananidzo padanho rakakura risingamboitike. Kuti tiite izvi, isu tinotanga nesampling yemifananidzo inowanikwa online iyo ine yakatarwa logo. Isu tinobva tatora, toti, Starbucks logo, uye nekuchinjisa nzira dzakasiyana siyana dzekugadzira seti yekudzidzira iyo inobvumidza iyo tech kuti ione Starbucks marogo akatsauswa, kana munzvimbo dzakazara sechitoro chekofi. Ipapo isu tinodzidzisa iwo mamodheru emakomputa tichishandisa musanganiswa wezvakagadzirwa zvemukati uye nemifananidzo yakagadziridzwa. Richard Lee, CEO, Netra
Pazasi pane muenzaniso wemufananidzo iyo Netra software yakamedza kubva kuTumblr. Kunyangwe hazvo chinyorwa chisina kutaura The North Face, Software yeNetra inokwanisa kuongorora iyo pikicha uye kuona kuvapo kwechiratidzo pakati pezvimwe zvinhu zvinonakidza, zvinosanganisira:
Zvinhu, zviitiko, uye zviitiko zvakaita seMakomo, Summit, Rwendo, Chando, uye Nguva yechando
Muchena murume ane makore 30-39
Iyo North Face brand logo ine 99% chivimbo
Netra inopa vatengi mukana wewebhu-yakavakirwa padhibhodhi kurodha mifananidzo uye / kana kuongorora mifananidzo yemagariro yakatorwa kubva kuTwitter, Tumblr, Pinterest, uye Instagram. Iyo software inowanikwa nekutengesa kune vatengi kuburikidza newebhu-based dashboard kana API yekambani software yemakambani. Netra tekinoroji yekombiki inogona zvakare kushandiswa kusanganisira mufananidzo indexing uye kutsvaga (dhijitari asset manejimendi) uye kuona kwekutsvaga.
Vashandisi vanogona kuona analytics pamatagi emifananidzo uye pindura mibvunzo yakakosha seiyi:
Chiratidzo changu chiri kupi chiri kuratidzika mumifananidzo uye mune mamiriro api?
Ndedzipi huwandu hwevanhu huri kuita nekodhi yangu mumifananidzo?
Ndeapi huwandu hwevanhu huri kuita nemakwenzi emakwenzi angu?
Ndezvipi zviitiko / zvigadzirwa izvo vatengi vanoita neangu mhando vanofarirawo?
Vashandisi vanogona kusefa mifananidzo zvichibva pamatanho ekubatana pamwe nemamiriro epikicha. Netra zvakare ine mukana wekugadzira tsika vateereri zvichibva pane zvemukati zvakatumirwa mukati mezvenhau mifananidzo. Semuenzaniso, Reebok anogona kushandisa software kunongedza vatengi vanoshingairira kurovera neakananga Crossfit kune vatengi avo vakatumira mifananidzo yavo pachavo vachiita zvekuita zvekuita mumavhiki maviri apfuura.
Isu tinotenda isu tine yakanakisa-mu-kirasi tech mumusika uye logo yekuona musika. Isu tinozvipatsanura pachedu nehumwe hwekuziva mufananidzo kugona. Kune imwe chete imwe kambani inogona kuita zvigadzirwa, marogo, zvinhu, zviitiko, nevanhu, uye iri Google. Mumusoro medu kusvika kumusoro bvunzo, isu tinoita zvakapetwa zvakapfuura ivo. Netra yekuona kwehungwaru mhinduro inogona kupa yakanyanya kukosha dhata yekuwedzera iripo vatengi data (semuenzaniso ruzivo rwehuwandu, zvinyorwa zvemashoko, data rekuki) izvo vashambadziro vezvemagariro vatove nazvo. Richard Lee, CEO, Netra
Anoshanda ekushandisa anosanganisira brand yekutarisa, kuterera munharaunda, kukurudzira munharaunda, kushambadzira kushambadzira, kutsvagisa kwekushambadzira uye kushambadzira.
Kumbira Kuwana kuNetra
Tags: aibrand yekutarisakudzidza zvakadzikakuonekwa kwisokubvuma mufananidzoInstagrammachine learningnetraPinterestvafambikuonekwareeboknechokumusoro kumesotumblrTwitterchinoonekwa chemufananidzokuonekwa kunooneka
Mia: Yemunharaunda Bhizinesi Ongororo, Kuvimbika, uye CRM
ConnectLeader TopRung: B2B Kutengesa Kubatanidzwa uye Performance Management Chishandiso